जहाँ यौन पेसामा रोक छैन – Rajdhani Daily
जहाँ यौन पेसामा रोक छैन
सार्क राष्ट्रमा बंगलादेश पुग्दा नेपालकै तराई पुगेजस्तो भएको थियो । त्योभन्दा पर पुग्दा अनुभव पनि अलग्गै हुने अपेक्षा थियो । एउटै कार्यालयमा काम गर्ने साथीहरूको जमातमै मिसिएर जाँदा छुट्टै महसुस । मनमा धेरै कुरा खेलिरहे । कस्तो होला थाइल्यान्ड ? नेपालबाट ११ जनाको टोली थाइल्यान्ड जाँदै थियो । केही साथीले रातारात (थप चार्ज तिरेर) पासपोर्ट बनाएका थिए । उनीहरूको मन त झन् चंगाझैं उडेको थियो ।
भिसा लगाउने र टिकेट लिनेजस्ता काम सम्पन्न भएपछि हामी डलरको जोरजाममा लाग्यौं । पर्यटक भिसामा घुम्न जान लागेका हामीलाई कम्तीमा १ हजार डलर साटेको प्रमाण मागिँदोरहेछ । चिया पसलमा जति नै ठूला कुरा गरे पनि नियम कानुन त मान्नै प¥यो । हामी सबैले मान्यौं पनि । हुन त यो टोलीमा भएका हामी सबै नियम कानुनभन्दा परको समाज सोच्न नसक्ने खालका छौं । अरूलाई पनि नियम मान्नुपर्छ भनेर पैरवी चलाउनेहरूको जमात भएकाले नियमबाहेकको परिकल्पना हामीसँग थिएन र छैन पनि ।
काठमाडौं विमानस्थलमा छँदासम्म स्वदेशी हावा । साढे तीन घण्टाको यात्रापछि विदेशी तातो हावा । प्लेनबाट झर्नेबित्तिकै ‘टुरिस्ट’ † बैंककमा अवतरण हुनुअघि छेवैमा रहेका भार्गवले भन्नुभयो, ‘ल हेर्नुस्, कत्रो सहर ?’ जताततै झिलीमिली † साँच्चै आँखा नै तिरमिराउने खालको थियो । मैले तत्काल जबाफ फर्काइहालें, ‘हामीलाई स्वागत गर्न दीप प्रज्ज्वलन गरेका †’ यस्तै यस्तै गफ गर्दागर्दै हाम्रो ‘थाई’ पनि ‘अस्थायी (३–४ दिनका लागि)ल्यान्ड’ भयो थाइल्यान्डमा ! विमानस्थलमा एउटा हाइस हामीलाई लिन तम्तयार भएर बसेको रहेछ । त्यहाँबाट उसले हामीलाई बोक्यो पतैयाका लागि । हामी गफगाफमा नै थियौं । ऊ हाम्रो कुरा बुझ्दैनथ्यो हामी उसको कुरा ! ऊ कानमा एयरफोन कोचेर थाई गीत सुन्दै गाडी गुडाउन थाल्यो, हामी गफगाफमा । भोक लागेकाले कतै रोक्न आग्रह गर्नु थियो । अगाडि सिटमा म थिएँ । मैले नै आग्रह गर्नुप¥यो । उसले सडक आसपासमा नै ‘सेभेन इलाभेन’ नाम गरेको पसलमा रोकिदियो । जुन हाम्रो रोजाइ थियो । त्यहाँ सस्तोमा आवश्यक धेरै चिज पाइन्छ भन्ने सुनेको थिएँ ।
यसअघि जानेले भोगेका थिए । खाना त खाइयो तर गन्हाउने † हामी नेपाली खान्की र बान्कीका मानिसलाई न उताको खान्की रुचिकर न बान्की नै ! हुन त नेपाली उता जाने धेरै कारण नै नहुँदो रहेछ । त्यताको ‘बान्की’ मुख्य कारण रहेछ । २ जति बजेको हुँदो हो हामी पतैया पुग्दा । सेभेन इलाभेनमा हामीले खाना खाएका थियौं । उता पुगेपछि शिव खकुरेलले त नेपाली बिर्सनुहुन्छ कि भन्ने डर † हामीसँग पनि अंग्रेजी मात्रै बोल्ने । सुत्नका लागि पनि अंग्रेजीमा नै आग्रह गर्नुभयो । यो आग्रह अन्तै हो कि भनेर यसो यताउता हेरेको त वहाँ र म मात्रै पो रहेछौं त † पतैया पुगेपछि सुत्ने तरखरमा लाग्यौं । केही साथीहरू बिहानीको रातको पतैया र समुद्र किनारतिर लागेछन् । भोलिपल्ट मात्रै थाहा भयो, केही साथी त्यतिबेलै त्यताको खान्की र बान्की तिर अल्मलिएछन् । समुद्रको किनारमा पुगेका साथीहरू ‘जलपान’ र ‘नेत्रपान’ गरेर फर्किएछन् ।
पतैया समुद्र किनारमा छ । यहाँबाट कोरल आइल्यान्ड जाने कार्यक्रम थियो । उतैतिर लाग्यौं । घरिघरि हामी झुकिन्थ्यौं, ‘थाइल्यान्डमा छौं कि भारतमा ।’ कारण, जताततै भारतीय । सामान बेच्न पनि उनीहरू नै आइपुग्छन् । उनीहरूकै दौडधुप । समुद्र केही पर हामी प्याराग्लाइडिङका लागि रोकियौं । पाखा भित्तामा हुर्किएको म प्रायः उफ्रन, फड्कन र उकालो ओरालो हिँड्न रुचाउँछु । फेसबुकमा त्यस्तै फोटो पोस्ट गर्दै आएकाले साथीहरूले नउड्लास् भनेर सफ्ट धम्की नै दिएका थिए । ५ सय भाटमा त्यो प्याकेज किनेर आकासिएँ । हाम्रो टोलीका दुईजनाबाहेक सबै उडे । ३–५ मिनेटमा ५ सय भाट स्वाहा † तर, नयाँ अनुभव बटुलेकोमा साथीहरू बेखुस हुनुहुन्नथ्यो ।
उडानक्रममा म दुर्घटनामा परें । दुवै गोडामा चोट लाग्यो । तर पनि उडें । त्यसपछि केही पर समुद्रको पिँधमा जाने अर्को ‘फन्डा’ रहेछ । साथीहरू टाउकामा बडेमानका ‘अक्सिजन क्याप’ (नाम के हो थाहा छैन, अक्सिजनका लागि टाउकामा लगाइएकाले अक्सिजन क्याप भनेको हुँ ।) लगाएर पिँधतिर लागे । मचाहिँ हल्का घाइते भएकाले त्यो रमाइलोमा सामेल हुन सकिनँ । त्यो रमाइलोमा हाम्रो टोलीका म, दुर्गा थापा, शिव खकुरेल र दिल्लीवाली गएनौं । त्यसपछि कोरल आइल्यान्ड पुगियो । सेतासेता तिघ्रा देखाएका तिघ्रे नै तिघ्रे फेला परे । नांगाका देशमा जाँदा नांगै हुनु भन्ने उखान सम्भेंm । म पनि ‘अर्धनग्न’ बनें । साथीहरू पनि उस्तै । को कताको को के उद्देश्यले आएको पत्तै नहुने जस्तो भइयो ।
साथी पत्ता लगाउन अनुहार नहेरी थाहा नहुने परिस्थिति निर्माण भयो । सबै थाई देखाएर आआफ्ना धुनमा । त्यस्तै ‘थाई’ ल्यान्ड गर्नेको संख्या उल्लेख्य भएर देशको नाम नै थाइल्यान्ड पो राखेको हो कि आपसमा छलफल ग¥यौं । जुन छलफल समय कटाउने खालको मात्रै थियो । तर, हो कि जस्तो पनि लाग्ने । त्यहाँ बनाना बोटिङ पछि केही बेर यतायता टहलपहल गरियो । बनना बोटबाट लड्दा त सात्तै गयो, भन्नुहुन्थ्यो गणेश भण्डारी ।
त्यसपछि फेरि पतैया आइयो । पतैया फर्कने बेलामा नारायण सुवेदी ‘बेपत्ता’ † न फोन छ । न चिनेजानेका मान्छे । प¥यो फसाद † पढेलेखेको मान्छे सोधखोज गर्दै र सहयोग माग्दै आउनुहुन्छ नआत्तिऔं भनेर के भनेको थिएँ । सुर्खेती मगर दुर्गा थापा रिसले चुर † उहाँ पनि ओर्लन खोज्नुभयो । बल्लतल्ल उहाँलाई सम्हालियो । अर्कै बोटमा चढेर सुवेदीजी पहिल्यै पतया । आइल्यान्ड पुगेर फर्कने क्रममा आपूmसँग भएको चिज बेच्न सके आर्थिक अभाव हुँदैन भन्ने यहाँको सरकार र नागरिकले प्रमाणित गरेको देखियो । बोल्नेको नुन पनि बिक्छ नबोल्नेको सुन पनि बिक्दैन भनेको हो रहेछ ।
यौन पेसामा लाग्न चाहने महिला वा पुरूष कसैलाई पनि जहाँ राज्यले रोकेको छैन । यौनकर्मीस“ग ‘लाइसेन्स’ हुन्छ वा के हो, थाहा भएन । तर, क्लबमा यौन व्यवसायको प्रमाणपत्र नहु“दो रहेछ ।पुरूष दर्शक रहेर महिलाको क्लब चलेजस्तै महिलाका लागि पनि ‘ह्यान्डसम’ क्लब यहा“ प्रशस्तै छन्
५ लाख १३ हजार १ सय २० वर्ग किमि क्षेत्रफल भएको थाइल्यान्डको जनसंख्या ६ करोड ९२ लाख ८७ हजार ५ सय २८ छ । थाइल्यान्डमा वर्षभर उस्तै हावापानी हु“दो रहेछ । २३ देखि ३६ डिग्रीसम्म तापक्रम हुन्छ । यो उष्णभूमिमा यौन केवल व्यवसाय बनेको छ
५ लाख १३ हजार १ सय २० वर्ग किमि क्षेत्रफल भएको थाइल्यान्डको जनसंख्या ६ करोड ९२ लाख ८७ हजार ५ सय २८ छ । थाइल्यान्डमा वर्षभरि नै उस्तै हावापानी हुँदा ेरहेछ । २३ देखि ३६ डिग्रीसम्म तापक्रम हुन्छ । यो उष्णभूमिमा यौन केवल व्यवसाय बनेको छ । पर्यटनको मुख्य आकर्षण बनेको छ । यसलाई यौन पर्यटन केन्द्र भने पनि हुन्छ । नेपाली समाजले लुकाउने तर बेलाबेलामा विस्फोट हुने यौन कुण्ठा थाई समाजमा छैन कि भैंm लाग्यो । तर, त्यहाँ पनि बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध हुने गुगलमा सर्च गर्दा पाइयो । थाइल्यान्डमा यौन हिंसा ग¥यो भनेचाहिँ १५ वर्ष कैददेखि बलात्कारीलाई मृत्यु दण्डसम्मको व्यवस्था रहेछ । यौन पर्यटनबाट पैसा कमाउने बानी परेका थाई महिला अहिले धेरै समय लगाएर कम पैसा आउने काम गर्न सितिमिति रुचाउँदैनन् । मसाज गर्नेदेखि छोटो समयमा धेरै कमाउने यौन पेसा उनीहरूको मुख्य रोजाइ हो । थाइल्यान्डका बाटोबाटोमा पर्चा थमाएर ‘मसाज सर मसाज, मसाज म्याम मसाज’ भन्छन् । जुन पतयादेखि बैंककसम्म नै पाइयो ।
यौन पेसामा लाग्न चाहने महिला वा पुरुष कसैलाई पनि यहाँ राज्यले रोकेको छैन । यौनकर्मीसँग ‘लाइसेन्स’ हुन्छ वा के हो थाहा भएन । तर, क्लबहरूमा यौन व्यवसायको प्रमाणपत्रचाहिँ नहुँदो रहेछ । पुरुष दर्शक रहेर महिलाको क्लब चलेजस्तै महिलाका लागि पनि ह्यान्डसम क्लब यहाँ प्रशस्तै छन् । पुरुष दर्शक हुने क्लबमा महिलाका यौन चर्तिकला र महिला दर्शक हुने क्लबमा पुरूषले यौनसम्बन्धी चर्तिकला देखाउँदा रहेछन् । थाइल्यान्ड यसरी यौनको मामिलामा उदार रहनुका पनि केही कारण छन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा छिमेकी देश भियतनामबाट भागेर आएका अंग्रेज सेना र अन्य साधारण अंग्रेज तथा युरोपियनहरू लामो समयसम्म यहीँ बसे । उनीहरू हरेकले यहाँ बस्दा एकएक जना गरिब थाई महिलाको साथ लागेर बसे । उनीहरूले आफ्नो जीवन पनि यहीँ फाले । अनि उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति पनि तिनै महिलालाई छाडेर गए । यसरी पर्यटक आएर थाई महिला रोजेर बस्ने परम्परा आजसम्म पनि कायमै रहेको पाइन्छ । यही चलनको प्रभाव बढ्दै यौन पर्यटनले ठाउँ पाएको बुझ्न सकिन्छ ।
यहाँ साग बेचेजस्तै त्यहाँ आवधिक मसाज गर्न मोलमोलाइ हुने रहेछ । कुरो मिलेपछि काम खत्तम † समय र पैसाको सीमा तय भइसकेपछि थप छलफल हुँदैन । (भाषा बुझे पो हुनु) पतिपत्नी जोडी नै (कसैकसैले त सन्तान पनि) सँगै आएर मोलमोलाई गर्ने र कुरा मिलेपछि एक जनाभित्र पति वा पत्नी होटल बाहिर कुरेर बस्ने गरेको पनि पाइयो । ‘काम’ सकिएपछि दुवै जना अर्को ठाउँमा आफ्नै ‘व्यापार’का लागि जाने रहेछन् । उनीहरूको दैनिकी यसरी नै चलेको छ । कार लिएर ‘काम’ खोज्न आउने र ‘काम’ सकिएपछि कारैमा फिर्ने † ट्याग भिरेर लाइन बसेका यौनकर्मीलाई अनुभवी ग्राहकले रोज्ने रहेछन् । थाहा नभएकालाई त केको ट्याग भन्ने कुरा पत्ता लगाउँदैमा एक रात बित्ने क्या † दिनभर सँगै रहेका साथीहरू रात्रिकालीन बजार हेर्ने बेलामा को कता ? को कता ? पत्तै लागेन । कोही कोही के हो के हो ? जे होस्, अबेर राति भए पनि होटलमै जमघट ।
पसलदेखि होटलसम्म बर्मेली नेपालीले नै काम गर्दा रहेछन् । बर्मेली युवाको मुख्य रोजगार गन्तव्य थाइल्यान्ड रहेछ । खुसुक्क आउने । भिसा लगाएर होइन । स्थलमार्गबाट पनि होइन । जलमार्गबाट खुसुक्क † उनीहरूलाई नेपाली भन्दा खिस्स हास्ने र बर्मेलीभन्दा हल्का चित्त देखाउने रहेछन् । नेपालीले भेट्दा नेपाली नै भनून् भनेर उनीहरूको अन्तस्करणले भन्दो हो । आफ्नो मातृभूमि नेपाल नभए पनि पूर्खाहरूको भूमिको प्यार त पक्कै लाग्दो हो नि † बजारमा बरालिने नेपालीलाई नेपालीमा नै कुरा गरी महँगोमा सामान बेच्न खप्पिस रहेछन् बर्मेली † केही नलागे खिस्स हास्ने, जीउतिर सुम्सुम्याउने । तर, नेपाली ग्राहक हत्तपत्त नफुत्काउने । अरूलाई के गर्छन्, थाहा भएन । नेपालीसँग चाहिँ जुको टाँसिएभैंm टाँसिएरै भए पनि सामान बेच्ने । नेपालकै केही जानेबुझेकाहरूले ‘हाकिम’लाई ‘आफ्नो’ बनाउन र अरूसँगको सम्बन्ध टुटाउन यस्ते हर्कत गर्ने गरेको साथीसंगतबाट थाहा पाइएको थियो ।
चाकडी र चाप्लुसी गर्नेहरूले विभिन्न कुरा लगाएर ‘एक गरियो तेल’ नै लगाएर भए पनि हाकिमलाई ‘अन्धो’ बनाएर अरूसँगको सम्बन्ध स्वाहा बनाएर पछि कार्यक्रमहरू नै स्वाहा पारिएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । त्यसैले चाकडी र चाप्लुसीबाजलाई टाढा राख्न नसक्नेले न आफ्नो हित गर्न सक्छ न सहकर्मीकै भनिएको होला । उतै गएर आएकाले अपनाउने उपाय रहेछ क्यारे † थाई नागरिकसँग भने एस ह्याभ र नो ह्याभबाटै किनमेल टुंगिने हुँदा सजिलो हुने भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कृष्ण गौतम ।
Tags: जहाँ यौन पेसामा रोक छैन